Ikhaya Amasu we Forex Phezulu 5 Umkhuba Ohamba Phambili We Forex Ukulandela Amasu Asebenzayo
Amasu alandelayo we-5Trend amasu okuhweba lapho abahwebi behweba kuphela emakethe ethrendayo kanye nezikhombisi-ndlela zohwebo zithathwa ngendlela yethrendi.. Lapho intengo ilokhu ikhuphuka njalo, khona-ke abahwebi kufanele ngabe bayathenga. Uma amanani ehla njalo, khona-ke abahwebi kufanele ngabe bayathengisa noma bashoda emakethe.
Ukuhweba okuthrendayo kuhambisana nomqondo wokuthi ukuhweba kufanele kuthathwe lapho imakethe igeleza khona. Kuyifilosofi yokuhweba enengqondo njengoba ukuhweba ngokugeleza kwemakethe kuthiwa kulula uma kuqhathaniswa nokuhweba ngokumelene nakho.. Zibone ngeso lengqondo ubhukuda ukhuphuka nomfula. Bekungeke yini kube lula ukubhukuda uye phansi nomfula? Umbono ofanayo uyiqiniso ngokulandela izitayela. Abahwebi bazama ukuhlonza inkomba yenkambiso futhi bahwebe ngayo.
Ziningi izindlela zokuhwebelana nethrendi. Abanye bahweba ngokubuyisela emuva ngenkathi abanye behweba ekuqaleni komfutho. Abanye bahweba besebenzisa amasignali ezinkomba zobuchwepheshe bebodwa kuyilapho abanye behweba ngokusekelwe esenzweni samanani.
Ngezansi kukhona amasu amahlanu ahlukene abathengisi abangawasebenzisa ngesikhathi semakethe ethrendayo emisiwe.
MA Buyisela Forex Trend Ukulandela Isu
1 MA Buyisela Forex Trend Ukulandela Isu
1.1 I-Guppy Multiple Moving Average
1.2 I-MUV Inkomba
2 I-Fisher Optimum Forex Trend elandelayo Isu
2.2 I-Fisher Yur4ik
3 I-Fibonacci Pullback Forex Trend elandelayo Isu
3.1 amazombe Inkomba
3.2 I-Fibonacci Retracement Rule
4 Isiteshi Amagagasi Forex Trend Ukulandela Isu
4.1 Iziteshi Donchian
4.2 Fisher Inkomba
4.3 Isu Lokuhweba
4.4 Thenga ukusethwa kwezohwebo
4.5 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
5 Awesome Bollinger Forex Trend Ukulandela Isu
5.2 Amabhendi eBollinger
5.5 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
6 Amazwi Okugcina
6.3 Indlela yokufaka i-Top 5 Umkhuba Ohamba Phambili We Forex Ukulandela Amasu Asebenzayo?
Ukuhweba ngamathrendi asungulwe kunengqondo kakhulu. Uma ungabheka amashadi omlando futhi usebenzise noma iyiphi inkomba engasiza abahwebi bakhombe ithrendi, uzoqaphela ukuthi ukunyakaza kwamanani okubikezelwa kuvame ukuba njani uma inkambiso isisunguliwe.
Nokho naphezu kwamaphethini ayo okunyakaza abonakala ebikezelwa kakhulu, ukuhweba ngamathrendi amisiwe kuvame ukukhohlisa kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi amasu amaningi alandelayo adinga abahwebi ukuthi bahwebe lapho intengo isezingeni eliphezulu lesigaba sayo samanje sokukhula.
Esikhundleni sokuthenga lapho imakethe isezingeni eliphakeme lokuthambekela kwe-bullish noma emgudwini we-bearish, abadayisi kufanele bahwebe ekubuyiselweni emuva. Abahwebi abafunde ikhono lokufaka isikhathi ekubuyiselweni emuva bangenza imali kalula ngemakethe ethrendayo.
I-Guppy Multiple Moving Average
Izilinganiso ezihambayo cishe ziyizinhlobo ezilula zezinkomba. Nokho le nkomba elula cishe ingelinye lamathuluzi asebenza kahle kakhulu abahwebi abangawasebenzisa esimweni semakethe esithrendayo.
Intengo ihamba ngochungechunge lokunwetshwa nokutholwa kabusha ngesikhathi semakethe ethrendayo. Intengo izohamba ngokushesha iye lapho kuthrenda khona bese iphindela emuva kwenani layo. I-Logic izositshela ukuthi kungcono kakhulu ukungena kwezohwebo ngendlela yethrendi ngesikhathi sokubuyisela emuva futhi uphume ekuhwebeni esigabeni sokunwetshwa.. Noma kunjalo, lokhu kulula ukukusho kunokukwenza. Kunzima impela ukubuyisela emuva isikhathi.
Izilinganiso ezihambayo zivame ukusetshenziswa njengegeji elikala ukujula kokuphinda kulandelelwe. Lokhu kuvumela abadayisi ukuthi bahlole kangcono ukuthi ingabe intengo ibuyele ekujuleni ngokwanele ukuze kugunyazwe okufakiwe okusekelwe ekubuyiselweni emuva noma cha.. Intengo ivamise ukugxuma isuka kuma-avareji anyakazayo ngakho-ke ivamise ukusetshenziswa njengendawo eguquguqukayo yosekelo nokumelana.
I-Guppy Multiple Moving Average (GMMA) inkomba elandelayo ethrendayo esebenzisa izilinganiso ezihambayo eziningi. Lokhu kudala ibhande lama-avareji ahambayo akhula ngesikhathi semakethe ethrendayo nezinkontileka njengoba ithrendi iqala ukufiphala..
Kuphinde kube yithuluzi elisebenzayo lokusebenzisa njengendawo eguquguqukayo yokwesekwa nokumelana. Intengo ivamise ukubuyela emazingeni amaphakathi anyakazayo bese igxuma ngesikhathi semakethe ethrendayo.
Inkomba ye-MUV iyinkomba eguquliwe enyakazayo esuselwe ku-TD Moving Average ka-Tom Demark.
Lesi sikhombi esiyisilinganiso sokuhamba ngokwezifiso besihloselwe ukukhomba ukubekwa kokumiswa kokulahleka namaphoyinti okuphuma. Noma kunjalo, emakethe ethrendayo lapho kukhona ukulandelela okuningi, ingase futhi isetshenziselwe ukukhomba ukuphela kokuphinda kulandelelwe. Yilapho intengo ivala ngaphezu kwayo ngemuva kokuphinda kulandelelwe kumkhuba we-bullish, noma ngaphansi kwayo ngemva kokulandelela kuthrendi ye-bearish.
Leli su lokuhweba liwumkhuba olula wokulandela isu elinikeza okufakiwe ngemuva nje kokuphinda kulandelelwe.
Isebenzisa inkomba ye-Guppy Multiple Moving Average njengesisekelo sokujula kokulandelela kanye nendawo eguquguqukayo yokusekelwa nokumelana.. Intengo kufanele ibuyele ku-GMMA bese igxuma isuka kuyo. Njengoba intengo igxuma emigqeni ye-GMMA, kufanele-ke ivale ngale kolayini we-MUV okukhombisa ukuthi ukubuyiswa sekuphelile futhi intengo isilungele ukuqala isigaba esisha sokunweba ngokuqonda kwethrendi..
Ukuze uvumelanise ukuhweba nokuthambekela kwesikhathi eside, the 200 Exponential Moving Average (UMAMA) izosetshenziswa njengesihlungi sethrendi. Inani, kanye nemigqa ye-MUV kanye ne-GMMA, kufanele ibe ohlangothini olufanele lwe 200 I-EMA ngokuya ngesiqondiso somkhuba.
Izikhathi ezibekiwe: 15-umzuzu, 30-umzuzu, 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Inani, ulayini we-MUV kanye nemigqa ye-GMMA kufanele ibe ngaphezu kwe 200 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwe-bullish.
I- 200 I-EMA kufanele yehlele phezulu ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish yesikhathi eside.
Intengo kufanele ibuyele emigqeni ye-GMMA bese igxuma isuke kuyo.
Intengo kufanele-ke ivale ngaphezu komugqa we-MUV ekhombisa ukuphela kokulandelela kanye nokuqala okungenzeka kwesigaba sokunwetshwa kwe-bullish..
Inani, ulayini we-MUV kanye nemigqa ye-GMMA kufanele ibe ngaphansi kwe 200 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
I- 200 I-EMA kufanele yehlele phansi ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish yesikhathi eside.
Intengo kufanele-ke ivale ngezansi komugqa we-MUV ekhombisa ukuphela kokulandelela kanye nokuqala okungenzeka kwesigaba sokunwebeka se-bearish.
Lolu hlobo lwesu lokuhweba lungenye yezinhlobo eziyisisekelo kakhulu zethrendi elandelayo yamasu. Ihlinzeka ngokufakwa kabusha okusekelwe ekulandeleleni kabusha okuya endaweni eguquguqukayo yosekelo noma yokumelana okuvumela abahwebi ukuthi bangene kwezohwebo ngenani elingcono kunokujaha intengo esigabeni sokunwetshwa..
Leli su lisebenzisa isilinganiso esingaguquki sengozi yomvuzo engu-1.5x. Noma kunjalo, abadayisi abanesifiso esihlukile sobungozi bangakushintsha lokhu. Ukuba nesiphindaphindi sethagethi yenzuzo ephezulu kunikeza isilinganiso esingcono somvuzo kodwa kungase kwehlise isilinganiso sokuwina, kuyilapho abaphindaphindayo abaphansi bengathuthukisa isilinganiso sokuwina kodwa behlise isilinganiso sengozi yomvuzo.
Abanye abathengisi bakhetha ukuphuma kwezohwebo mathupha esikhundleni sokusebenzisa isilinganiso esinqunyiwe sethagethi yenzuzo. Ngekucabanga, lokhu kufanele kuveze imiphumela engcono kakhulu, nokho ukwesaba, ubugovu nezinye izici ezingokomzwelo ngokuvamile zingabangela abathengisi ukuthi baphume ngaphambi kwesikhathi noma bavale ukuhweba okunenzuzo sekwephuzile.. Lokhu kuvame ukuholela ekukhuleni okuphansi kwe-akhawunti yokuhweba.
I-Fisher Optimum Forex Trend elandelayo Isu
Esinye isihluthulelo sokuhlonza amathuba okungena kwezohwebo esimweni semakethe esithrendayo ukusebenzisa iziphazamiso kanye nokuhlela kabusha ama-confluences njengenkomba yokubuyiswa kabusha kwesikhashana kanye nokuqalwa kabusha kwethrendi..
Ukuhlangana kuyingxenye ebalulekile yamaqhinga amaningi namasu okulandela okuthrendayo awahlukile kulokhu. Abahwebi bavamise ukuthatha uhwebo noma nini lapho amasiginali okuhweba avela ezinkomba ezahlukahlukene eqondana. ngokuvamile, ukuhweba okuvela ekuhlanganeni kwezinto kungaholela ekuthambekeni. Kunezimo lapho isici esisodwa noma ezimbili ezibonisa isiqondiso sethrendi zizohlehla okwesikhashana. Lokhu kuvame ukukwenzeka lapho ukubuyiselwa emuva kwenzeka. Noma kunjalo, kungokwesikhashana nje. Ithrendi ingase iqalise kabusha isiqondiso sayo sokuqala ngokushesha nje lapho ama-confluence aqondana.
I-Fisher Optimum Forex Trend Following Strategy iyisu elisebenzisa inkomba ukuhlonza ukubuyiselwa emuva kwesikhathi esifushane ngesikhathi semakethe ethrendayo..
Inkomba ye-i-AMA Optimum iyinkomba yangokwezifiso esekelwe ku-Adaptive Moving Average (KODWA) ithuthukiswe nguPerry Kaufman.
I-i-AMA Optimum iyinkomba eguquliwe enyakazayo elungiselelwe ukuhlonza okumaphakathi- kanye nezitayela zesikhathi eside. Ibonakala ngomugqa omaphakathi ohambayo olandela inani eduze kwesimo semakethe esinomsindo ophansi, nokho futhi kuvame ukuba bushelelezi kunamanye ama-avareji ahambayo uma usemakethe e-choppy.
Inkomba ye-Fisher Yur4ik iyinkomba e-oscillating ebonisa amabha e-histogram ukukhombisa isiqondiso sethrendi.. Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish.
Inkomba ye-Fisher Yur4ik iyachuma esikhathini esifushane- kanye namathrendi amaphakathi nethemu. Ukushintshashintsha okufushane okubangelwa ukubuyiswa kabusha kungabangela inkomba ye-Fisher Yur4ik ukuthi ihlehle okwesikhashana noma ngabe ukuthambekela kwesikhathi eside kusekhona..
I-Fisher Optimum Forex Trend Following Strategy iyisu elihweba ngokuhlehlisa libheke esilinganisweni esimaphakathi nesikhathi ngenkathi umkhuba wesikhathi eside usekhona futhi usathrenda ngokusobala..
I- 200 Exponential Moving Average (UMAMA) umugqa usetshenziselwa ukukhomba isiqondiso sethrendi yesikhathi eside. Ukuqondiswa komkhondo kususelwa endaweni yentengo maqondana ne- 200 UMAMA. Price ngaphezu 200 I-EMA ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish ngenkathi intengo ingaphansi kwe- 200 I-EMA ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Noma kunjalo, ngaphandle kwentengo, i-AMA Optimum kufanele futhi ibe ohlangothini olufanele lwe 200 UMAMA. Ulayini we-i-AMA Optimum kufanele ube ngaphezu kwe 200 Umugqa we-EMA kuthrendi ye-bullish nangaphansi kwe- 200 I-EMA kuthrendi ye-bearish.
Ngaphandle kwendawo yentengo kanye nolayini we-i-AMA, umthambeka we 200 I-EMA izophinde isetshenziselwe ukukhombisa isiqondiso sethrendi. Ukuya phezulu 200 Ama-EMA akhombisa ukuthambekela kwe-bullish ngenkathi yehla 200 Ama-EMA akhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Imithambeka ekhuphukayo ikhombisa ithrendi enamandla kuyilapho ukuthambeka okucaba kungabonisa ithrendi ebuthaka.
Ukuze uhlonze okufakiwe okuvumelekile, intengo kufanele ibuyele endaweni yesikhombi se-i-AMA Optimum. Lokhu kubuyiselwa emuva kufanele kubangele amabha e-Fisher Yur4ik ukuthi ahlehle okwesikhashana. Lo mkhuba ube usuthathwa njengoqale kabusha indlela yawo yokuqala lapho nje inkomba ye-Fisher Yur4ik ivumelana nesiqondiso 200 UMAMA. Lokhu kufanele futhi kuhambisane nokweqa intengo phezu kwenkomba ye-i-AMA Optimum eya lapho ibheke khona izitayela ezikhona..
Ubude besikhathi: 15-amaminithi, 1-ihora namashadi wehora-4
Ulayini we-i-AMA Optimum kufanele ube ngaphezu kwe 200 UMAMA.
I- 200 Ulayini we-EMA kufanele wehlele phezulu okhombisa ukuthambekela kwe-bullish yesikhathi eside.
Intengo kufanele ibuyele emugqeni we-i-AMA Optimum.
Inkomba ye-Fisher Yur4ik kufanele ibonise okwesikhashana amabha e-histogram abomvu ngesikhathi sokubuyiswa.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho amabha e-Fisher Yur4ik eba i-histogram ye-lime eqondile kuyilapho uthi lwekhandlela livala njengekhandlela le-bullish.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher Yur4ik iphrinta amabha abomvu angalungile.
Ulayini we-i-AMA Optimum kufanele ube ngaphansi kwe 200 UMAMA.
I- 200 Ulayini we-EMA kufanele wehlele phansi okhombisa ithrendi yesikhathi eside ye-bearish.
Inkomba ye-Fisher Yur4ik kufanele ibonise okwesikhashana amabha e-histogram e-lime ngesikhathi sokubuyiswa.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho amabha e-Fisher Yur4ik eba i-histogram ebomvu eyinegethivu kuyilapho uthi lwekhandlela livala njengekhandlela le-bearish.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher Yur4ik iphrinta ama-lime ama-positive.
Lelisu lokuhweba liwumkhuba omuhle kakhulu wokulandela isu elihweba ngokubuyisela emuva. Ikhiqiza ukusethwa kohwebo okunezilinganiso ezingase zibe yingozi enkulu yomvuzo. Lokhu kuvumela abahwebi ukuthi bathole inzuzo enkulu ekuhwebeni okumbalwa nje. Noma kunjalo, ukulahlekelwa okuqinile kuvame ukubangela ukuthi ukuhweba kumiswe ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi kwesinye isikhathi inkomba ye-Fisher Yur4ik ingaba ngaphambi kwesikhathi kakhulu ekubuyiseleni emuva. Abahwebi bangakhetha ukubeka ukulahleka kokumisa kancane ukuze bavumele intengo ibe nendawo yokunyakazisa. Lokhu kuzokwehlisa isilinganiso sengozi yomvuzo kodwa kuzothuthukisa isilinganiso sokuwina.
Kungcono futhi ukusebenzisa leli su ngokuhlangana nohlobo lwesenzo sentengo yesu. Kungaba ukugqashuka komugqa wokusekela noma wokumelana noma iphethini yesibani. Ukuhweba okuhlanganiswe nokusetha isenzo samanani kuvame ukuthola imiphumela engcono.
I-Fibonacci Pullback Forex Trend elandelayo Isu
Nakuba ukuhweba kwesenzo samanani kubonakala kuhluke kakhulu ekuhwebeni kokuhlaziywa kobuchwepheshe okusekelwe ezinkomba zobuchwepheshe, ukuhweba usebenzisa isenzo senani kungenye indlela yokuhlaziya lobuchwepheshe esebenza kahle ekuhwebeni. Empeleni, kukhona abadayisi abafunga ngokuhweba ngamashadi anqunu kanye nokuhlaziywa kwesenzo samanani kuphela.
Ubuhle bokuhweba ngesenzo samanani ukuthi kusekelwe ekuhlaziyeni okune-lag encane. I-lag kuphela abadayisi abayitholayo lapho belinde ukuvala ikhandlela. Lokhu kuvumela abadayisi ukuthi babeke isikhathi sokungena ngokuphumelelayo ngokusekelwe ekwahluleleni kwabo. Noma kunjalo, abathengisi abasaqala ukuhwebelana ngokusekelwe esenzweni senani bavame ukuba nokunemba okuphansi uma kuziwa ekuhlonzeni okufakiwe okusebenzayo.. Leli khono liza nokuzijwayeza, isikhathi sesikrini, kanye nolwazi. Abahwebi abaye baphumelela kodwa bavame ukungena kwezohwebo ngesikhathi esifanele futhi bakwazi ukukhipha amapayipi amaningi ohwebo olulodwa..
Ukuhweba ngesenzo samanani yisikhathi esisebenza kahle kakhulu sesu uma sisetshenziswa esimweni semakethe esithrendayo. Ithrendi ibonakala kalula njengoba imakethe ngokuvamile izoba phezulu naphansi emakethe ye-bullish, kanye nokwehla kwezinga eliphezulu nokwehla emakethe ye-bearish. Lokhu kuvumela abadayisi ukuthi baqonde kakhulu ekuboneni isiqondiso sethrendi.
Ukulindela ukuthi intengo izobuyela kuphi kuyindaba ehlukile. Ukusebenzisa ishadi elinqunu, Kunzima kakhulu kubathengisi abaningi abasha ukukhomba ukuthi i-pullback izofinyelela kuphi. Yilapho izilinganiso ze-Fibonacci zingena khona ukuze zidlale. Intengo ivamise ukuhlehla iye kumazinga athile esilinganiso se-Fibonacci. Azikho izincazelo ezicacile ukuthi kungani isebenza, kepha kuyasebenza. Intengo ngokuvamile ivame ukubuyela emuva 38.2 isilinganiso ngesikhathi sokuthambekela komfutho onamandla kakhulu, futhi nxazonke 50 futhi 61.8 isilinganiso ngesikhathi sethrendi emaphakathi. I-Fibonacci Pullback Forex Trend Following Strategy isebenzisa lolu lwazi ukuze ilindele ukuhlehla futhi ithathe izinqumo zokungena ngokusekelwe esenzweni samanani esenzeka kulezi zindawo..
Inkomba ye-ZigZag iyithuluzi elibaluleke kakhulu abadayisi abangalisebenzisa. Le nkomba ihlonza ukuphakama kokushwibeka nokwehla kokushwiba futhi ixhuma lawa maphuzu ngomugqa owenza iphethini yamazombezombe.. Lokhu kuvumela abadayisi ukuthi babone ngokubukeka lapho amaphuzu okujika akuphi futhi basebenzise ulwazi olunjalo ngamasu abo okuhweba.
Abahwebi abahweba ngamaphoyinti okusekela nawokumelana noma izindawo zokuhlinzeka nezidingo bangasebenzisa amaphuzu okujika njengesisekelo sokusekelwa okuvundlile noma ukumelana noma indawo yokunikezela nesidingo..
Abathengisi besenzo senani bangakwazi futhi ukukhomba isiqondiso sethrendi besebenzisa le nkomba. Izimakethe ezihlala zenza amanani aphezulu naphansi ngokwezobuchwepheshe ziyimakethe ethrendayo ye-bullish. Ngokwesinye isandla, izimakethe ezihlala zenza amanani aphansi naphansi abhekwa njengemakethe ye-bearish ehamba phambili.
I-Fibonacci Retracement Rule
Irula lokubuyisela i-Fibonacci ngokuyisisekelo iyithuluzi elakhelwe ngaphakathi kuyo yonke inkundla ye-MT4. Noma kunjalo, abadayisi abaningi abasha abalinaki leli thuluzi ngenxa yokuntula ulwazi lokuthi lisetshenziswa kanjani.
Ukuze usebenzise irula ye-Fibo, abahwebi babenamathisela umkhawulo owodwa werula endaweni eyodwa yokushwiba bese beyixhuma ukuze baxhumanise enye indawo kwenye indawo yokushwiba. Ithuluzi libe selibonisa amaphuzu entengo lapho izilinganiso zokudonsa emuva noma ukubuyisela emuva zilindelwe.
Lelisu liwumkhuba olula olandela isu elihweba ngokudonsela emuva okutholakala ezimeni zemakethe ezihamba phambili kusetshenziswa inkomba ye-ZigZag.
Ukuhlonza imakethe ethrendayo, abathengisi kumele babheke ukuthi ukuphakama nokushwiba okuphansi njengoba kuboniswa inkomba ye-ZigZag kwenza ukuphakama nokwehla okuphezulu., noma ukuphakama okuphansi nokuphansi. Uma kunjalo, imakethe ingabhekwa njengethrendayo.
I-Fibonacci retracementrula ibe isixhunywa isuka endaweni eyodwa iye kwenye ukuze kukhonjwe ibanga lentengo lezilinganiso..
Leli su lihweba ekubuyiseleni okujulile okutholakala ezimakethe ezithrenda njalo. Kanjalo, sizobe silindele ukwenqatshwa kwentengo kanye nokuguqulwa ngemva kokuphinda silandelelwe kububanzi obuphakathi kwe 50 futhi 76.4 isilinganiso. Ibhokisi elingunxande lingase libekwe kulobu bubanzi ukumaka lapho besizofuna khona izimpawu zokwenqatshwa kwentengo nokuhlehliswa..
Ukungenela kwezohwebo kungacatshangelwa uma iphethini yekhandlela elihlehlayo yenzeka kule ndawo. Uma isenzo senani sibonisa ukuthi intengo ingase ihlehle, bese kwenziwa uhwebo. Uma iphuzu lokujika linembile, lokhu kuzobe sekuqinisekiswa umcibisholo ovezwa yinkomba ye-ZigZag Arrows futhi maduzane inamathiselwe ngomugqa ophuma kusibonisi se-ZigZag..
Izinhloso zenzuzo yokuthatha zizobekwa endaweni ephambene. Nakuba intengo kufanele yephule lawa maphuzu, sizobe sisebenzisa lezi zinhloso ze- take profit target njenge-conservative target.
Ubude besikhathi: 15-umzuzu, 30-umzuzu, 1-ihora namashadi wehora-4
Inkomba ye-ZigZag kufanele ikhombise ukuthi imakethe ihlezi yenza ukuphakama okuphezulu kanye nokwehla okuphezulu okukhomba ukuthi imakethe isesimweni se-bullish..
Setha irula lokubuyisela i-Fibonacci eduze komugqa we-ZigZag ukusuka ekujikeni phezulu kuye kokuphansi kokujiya.
Linda inani ukuze ulandelele ku- 50 futhi 76.4 Indawo yesilinganiso se-Fibonacci.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho iphethini ye-bullish ye-candlestick ibonakala kuleyo ndawo.
Setha umgomo wokuthatha inzuzo ekujikeni okuphezulu ngokusekelwe kulayini we-ZigZag.
Inkomba ye-ZigZag kufanele ikhombise ukuthi imakethe ihlezi yakha ukuphakama okuphansi nokuphansi okubonisa ukuthi imakethe isesimweni se-bearish..
Setha irula lokubuyisela i-Fibonacci eduze komugqa we-ZigZag ukusuka ekujikeni ukuya phansi ukuya phezulu.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho iphethini ye-bearish reversal candlestick ibonakala kuleyo ndawo.
Setha ukuqondisa kwenzuzo yokuthola ekujikeni okuphansi ngokusekelwe kulayini we-ZigZag.
Isenzo senani nabahwebi beshadi abanqunu ngokuvamile bahweba ngale ndlela. Noma kunjalo, kudinga ikhono nolwazi ukuhlonza amaphuzu okujika ngendlela efanele. Le ndlela, usebenzisa inkomba ye-ZigZag, ivumela abahwebi ukuthi babone kalula amaphuzu okujika futhi ngaleyo ndlela bahwebe ngempumelelo ekubuyiselweni emuva.
Abanye abathengisi besenzo senani bancamela ukusetha ithagethi ephezulu yokuthola inzuzo njengoba belulekwe kulelisu. Abahwebi abanezifiso eziyingozi kakhulu bangakhetha ukwenza okufanayo. Abanye bangakhetha ukusetha umgomo wokuthatha inzuzo ngokusekelwe kubude bomugqa wamanje we-ZigZag, kuyilapho abanye bezosebenzisa futhi banwebe isilinganiso se-Fibonacci ukuze babeke umgomo. Abanye bebengeke babeke ithagethi ye-take profit futhi esikhundleni salokho bavumele intengo isho ukuthi ifuna ukuya kuphi ngokususelwa kumaphethini wezinti zamakhandlela.. Enye inketho kungaba ukuthatha inzuzo kancane endaweni yokujingi bese usetha enye inzuzo yokuthola inzuzo ngokusekelwe ezindleleni ezishiwo ngenhla..
Isiteshi Amagagasi Forex Trend Ukulandela Isu
Enye indlela yokuhweba ngethrendi emisiwe ukusebenzisa izinkomba ezinamabhendi noma iziteshi. Lezi zinhlobo zezinkomba ziwusizo kakhulu kubathengisi abaningi, kungakhathaliseki ukuthi abathengisi be-trend reversal, kusho abahwebi abahlehlayo noma abadayisi abasheshayo.
Amasu okulandela okuthrendayo awahlukile. Abahwebi abahweba ngethrendi yokulandela amasu nabo bayazuza kulezi zinhlobo zezinkomba. Lokhu kungenxa yokuthi umfutho kanye nesiqondiso singabonwa kusetshenziswa lezi zinkomba, kuyilapho futhi inomugqa wentengo oyisilinganiso oboniswa eshadini. Lokhu kuvumela abahwebi ukuthi babone kalula ukuthi iyiphi inkomba okumele bayihwebe futhi babone kuphi ukubuyiswa kwentengo ukuze bahwebe ngempumelelo ngethrendi ekhona..
I-Channel Waves Forex Trend Following Strategy ihlinzeka ngokusethwa kwezohwebo okususelwa ekuqondeni kwenkambiso ekhona kanye nokufakiwe okususelwa ekubuyiselweni emuva kwencazelo..
I-Donchian Channel iyinkomba yezobuchwepheshe eyakhiwe ngu-Richard Donchian.
Le nkomba ihlinzeka ngolwazi olumayelana nenani elimaphakathi kanye nezindawo zentengo ethengwe ngokweqile noma edayiswe kakhulu.
Ulayini othengwe ngokweqile usekelwe ezindaweni eziphakeme kakhulu ze- n nkathi, kuyilapho ulayini odayiswe ngokweqile usekelwe kokuphansi okuphansi kwe- n nkathi. Emakethe ehlukahlukene, intengo ngokuvamile izohlala phakathi kwebanga lale migqa ngaphandle kokuhambisa imigqa yangaphandle kaningi. Noma kunjalo, ngesikhathi semakethe ethambelayo, intengo ngokuvamile ingaba ukwenyuka okuphezulu noma ukwehla okuphansi. Lokhu kubangela ukuthi imigqa yangaphandle ihlale ihamba phezulu noma phansi. Lesi sici sivumela abahwebi ukuthi bakhombe izitayela kanye nomfutho ngokusekelwe emigqeni yangaphandle.
Intengo emaphakathi noma umugqa ophakathi nawo usekelwe emigqeni yangaphandle. Ngokuyisisekelo iyintengo emaphakathi yomugqa ongenhla nomugqa ophansi. Ingasetshenziswa njengoba kuzosetshenziswa umugqa omaphakathi onyakazayo. Noma kunjalo, ngokungafani nomugqa ojwayelekile onyakazayo, umugqa omaphakathi we-Donchian Channel uvame ukusabela kakhulu ekunyakazeni kwentengo ngesikhathi semakethe ethrendayo futhi uzinze kakhulu phakathi nemakethe ehlukahlukene..
Inkomba ye-Fisher inkomba yobuchwepheshe e-oscillating ebonisa isiqondiso sethrendi kusetshenziswa amabha e-histogram. Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish. Amabha amahle nawo anombala we-lime kanti ama-negative anombala oluhlaza.
Ama-Crossovers ukusuka kokuphozithivu kuye kokubi noma okuphambene angasetshenziswa njengesignali yokuhlehla yethrendi. Noma kunjalo, lokhu akufanele kusetshenziswe njengesignali ezimele.
Inkomba ye-Fisher ijwayele ukusabela kakhulu ekunyakazeni kwentengo. Ngenxa yalokhu, inkomba ye-Fisher ingabonisa ukuhlehla ngisho nochungechunge olufushane lwamakhandlela okubuyisela emuva. Kanjalo, inkomba ye-Fisher isebenza kahle kakhulu lapho uhweba amathrendi esikhathi esifushane ngenhloso yokungena nokuphuma ekuhwebeni kusenesikhathi.
Leli su lokuhweba liwukulandela isu elisuselwe ekubuyiselweni kwentengo ukuya enanini elimaphakathi le-Donchian Channel.
Ukuhweba leli qhinga ngempumelelo, ukuhwebelana kumele kuhambisane nokuthambekela okujwayelekile. Isikhombisi-ndlela esithrendayo sizosuselwa ku-Simple Moving Average yezikhathi ezingu-50 (Isikolo sebanga eliphezulu). Inani kanye nomugqa omaphakathi we-Donchian Channel kufanele kubekwe ohlangothini olufanele lwe- 50 I-SMA esekelwe kumkhuba. I- 50 I-SMA kufanele futhi ibe etshekile ukukhombisa ukuthi imakethe ithrenda iqine ngokwanele.
Imigqa yangaphandle yama-Donchian Channels kufanele futhi ihlale ihamba okubonisa ukuthi ukuphakama okuphezulu noma okuphansi kuyakhiwa kuye ngokuthi ithrendi iya ngakuphi..
Intengo kufanele ihlehle ibheke emgqeni omaphakathi we-Donchian Channel bese iwela phezu kwayo okwesikhashana okubangele ukuthi inkomba ye-Fisher ihlehle okwesikhashana..
Ukuhweba kuthathwa ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher ikhombisa ukuthi lo mkhuba usuqalile futhi, futhi intengo iphinde yawela umugqa omaphakathi we-Donchian Channel futhi ibheke lapho kuqondiswa khona.
Ubude besikhathi: 1-ihora namashadi wehora-4
Umugqa omaphakathi we-Donchian Channel (blue) okufanele abe ngaphezu 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
I- 50 I-SMA kufanele ixegise phezulu ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish.
Intengo kufanele ibuyele ngaphansi komugqa omaphakathi we-Donchian Channel.
Inkomba ye-Fisher kufanele iphrinte okwesikhashana amabha abomvu anegethivu ngesikhathi sokuphinda kulandelelwe.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher iphrinta ibha ye-lime evumayo futhi intengo ivala ngaphezu komugqa omaphakathi we-Donchian Channel.
Setha ukulahleka kokuma ngezansi komugqa ophansi we-Donchian Channel (green).
Vala ukuhweba ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher iphrinta ibha ebomvu engalungile.
Umugqa omaphakathi we-Donchian Channel (blue) kufanele kube ngezansi 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
I- 50 I-SMA kufanele yehle phansi ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Intengo kufanele ibuyele emuva ngaphezu komugqa omaphakathi we-Donchian Channel.
Inkomba ye-Fisher kufanele iphrinte okwesikhashana ama-lime ama-positive ngesikhathi sokuphinda kulandelelwe.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher iphrinta ibha ebomvu enegethivu futhi intengo ivala ngaphansi komugqa omaphakathi we-Donchian Channel.
Setha ukulahleka kokumisa ngaphezu komugqa ophezulu we-Donchian Channel (red).
Vala ukuhweba ngokushesha lapho inkomba ye-Fisher iphrinta ibha ye-lime enhle.
Le threndi elandelayo isu iwukuhluka kwezinye izitayela ezilandela amasu asekelwe kubhendi noma ezinkomba zesiteshi. Okunye okuhlukile kusebenzisa ama-Bollinger Bands futhi kuhwebe ngokugxuma kubhande langaphandle njengoba intengo yeqa umugqa omaphakathi..
Isihluthulelo saleli su sisekukhombeni ngendlela efanele izimakethe ezithrendayo kanye nokuhweba ngokutholwa kabusha kanye nokuminyana. Kungcono futhi ukuvumelanisa ukuhweba nokuthambekela kwesikhathi esiphezulu njengoba lokhu kuvame ukukhiqiza imiphumela engcono.
Awesome Bollinger Forex Trend Ukulandela Isu
Enye indlela yokuhweba ngempumelelo ngesikhathi semakethe ethrendayo esimisiwe ukungena emakethe njengoba imakethe iqala ukukhuphuka ngamandla..
Izimakethe ezithrendayo ezinamandla ngokuvamile zibonakala ngemijikelezo yomfutho oqinile obheke lapho kuqondiswa khona, isenzo sohlangothi noma sokubuyisela emuva, omunye push umfutho, bese ubuyela futhi esenzweni eseceleni noma sokubuyisela emuva. Lo mjikelezo uyaziphinda kaningi kuze kube yilapho ukuthambekela kuyanyamalala.
Ukuhweba ngaphambi nje komfutho oqinile kuyindlela enhle yokungena emakethe esimweni esiqinile semakethe ethrendayo. Lokhu kungenxa yokuthi umfutho uqinisekisa ukuthi umkhuba usaqhubeka. Lokhu kusivumela njengabahwebi ukuthi sicabange ukuthi kukhona amathuba aphezulu okuthi intengo ingafinyelela umgomo ophusile wokuthatha inzuzo. Singase futhi sicabange ukuthi intengo ngeke ihlehle ngokushesha noma nini maduze.
I-Awesome Bollinger Forex Trend Following Strategy iqinisekisa isiqondiso esisekelwe ezinkomba zethrendi ezithembekile futhi inikeza amasignali okungena ngokusekelwe kumakhandlela ashukumisayo abonisa ukuqala komfutho oqinile..
I-Oscillator Eyesabekayo (UKUZE) iyinkomba elandela ithrendi esiza abathengisi ukuthi bakhombe isiqondiso sethrendi ngendlela efanele.
Lesi sikhombi esinyakazayo sibonisa amabha e-histogram ukukhombisa isiqondiso sethrendi. Amabha asekelwe kumehluko phakathi kwenkathi engu-5 kanye nenkathi engu-34 ye-Simple Moving Average (Isikolo sebanga eliphezulu). Noma kunjalo, izilinganiso ezihambayo ezisetshenzisiwe azisekelwe ekuvaleni kwekhandlela. Kunalokho, le nkomba isebenzisa i-median ephezulu nephansi yekhandlela njengesisekelo sokubala i-SMA.
Ama-histograms amahle akhombisa isiqondiso se-bullish yethrendi kuyilapho ama-histograms anegethivu abonisa isiqondiso se-bearish. Amabha aphinde ashintshe imibala kuye ngokuthi ibha yamanje inesibalo esikhulu kunebha yangaphambilini. Amabha anesibalo esikhulu kunebha yangaphambili anombala oluhlaza, kuyilapho amabha anesibalo esincane kunebha yangaphambili inombala obomvu. Lokhu kuzoba yinkomba yokuthi ngabe igebe phakathi kwe 5 futhi 34 I-SMA iyakhula noma iyankontileka.
I-Bollinger Bands ingenye inkomba elandela inkomba yezobuchwepheshe eyasungulwa nguJohn Bollinger ngawo-1980. Le nkomba ikhombisa inkomba yethrendi, isimo esishubile nomfutho, ukunikeza abahwebi umbono omuhle walokho okwenziwa yimakethe.
Le nkomba ibonisa imigqa emithathu - umugqa ophakathi kanye nemigqa emibili yangaphandle. Umugqa omaphakathi ngokuyisisekelo uyisilinganiso esinyakazayo, ngokuvamile I-Simple Moving Average (Isikolo sebanga eliphezulu). Imigqa yangaphandle iwukuchezuka okuvela emgqeni ophakathi.
Izingxenye ezintathu ze-Bollinger Bands zinganikeza ulwazi olwanele ukuze abahwebi basebenzise. Umugqa omaphakathi ungasetshenziswa njengesilinganiso esijwayelekile esinyakazayo esizosetshenziswa. Ingase ibonise isiqondiso sethrendi namandla ethrendi ngokusekelwe emthambekeni wayo. Imigqa yangaphandle inganikeza ulwazi mayelana nokuguquguquka, izimo ezidayiswe ngokweqile nezithengiwe ngokweqile, kanye nomfutho.
Ngesikhathi sokuntengantenga okuphezulu kwesimo semakethe esivame ukutholakala ezigabeni zokukhula kwemakethe, imigqa yangaphandle ivame ukunwebeka ikhulisa igebe phakathi kwemigqa emithathu. Ngokwesinye isandla, ngesikhathi sokuntengantenga okuphansi okujwayelekile esigabeni sokuncipha kwemakethe, imigqa yangaphandle nayo ijwayele ukwenza isivumelwano.
Inani elithinta imigqa yangaphandle lingasho izinto ezihlukile kubahwebi abahlukene. Abathengisi abahlehlisayo basho ukuthi lezi zimo ezithengiwe kakhulu noma ezidayiswe kakhulu. Abadayisi be-Momentum ngakolunye uhlangothi bangabheka ukuvala intengo ngale kwemigqa njengezinkomba zomfutho. Konke kuncike kumapharamitha asetshenziselwa ukusetha imigqa yangaphandle kanye nezici zamakhandlela njengoba ithinta imigqa yangaphandle.. Ukwenqatshwa kwentengo uma uthinta imigqa yangaphandle kungase kubangele ukuguqulwa okuthile, kuyilapho amakhandlela anamandla ahamba phezu kwemigqa yangaphandle angasho ukuqala komfutho omusha.
Leli su liqinisekisa ukuqondiswa kwethrendi okusekelwe ku-Awesome Oscillator kanye ne-Simple Moving Average yenkathi engu-50 (Isikolo sebanga eliphezulu).
Ukuqondiswa kwethrendi ku-Awesome Oscillator kuzosuselwa ekutheni amabha alungile noma anegethivu. Amabha kufanele futhi asuke ebangeni elide ukusuka emgqeni omaphakathi ezingxenyeni eziningi zethrendi. Njengoba intengo iqala ukwehla noma ihlehle iqonde kulokho okushiwo, kuvamile ukubona ukuthi imigoqo isondela kumugqa omaphakathi, Nokho, imigoqo akufanele isondele kakhulu njengoba lokhu kungase kusho ukuthi lo mkhuba ungase uphele.
I- 50 I-SMA izosetshenziswa njengesihlungi sesiqondiso esijwayelekile. Umkhuba uzosuselwa endaweni yentengo maqondana 50 Isikolo sebanga eliphezulu. Ngesikhathi sesimo esithrendayo, intengo akufanele ithinte i 50 I-SMA futhi kufanele ibe nebanga elide ukusuka kuyo. Ukuqondiswa kwethrendi nakho kuzosuselwa emthambekeni we- 50 Isikolo sebanga eliphezulu. Umqansa owehlelayo 50 I-SMA ingaba yinhle njengoba lokhu kukhombisa ukuthambekela okuqinile.
Amabhendi e-Bollinger azosetshenziselwa ukukhomba ukufinyela nomfutho. Lelisu lisebenzisa amasethi amabili e-Bollinger Band. Omunye uzoba nokuchezuka okujwayelekile kwe 0.5 futhi enye izoba nokuchezuka okujwayelekile kwe 1. Lokhu kuzosivumela ukuthi sibone ngeso lengqondo kalula ukuthi imakethe inenkontileka noma iyakhula futhi uma intengo isibuyele emalini esekelwe kuma-Bollinger Bands.. Ngesikhathi sokunwetshwa kwemakethe ethrendayo enamandla, intengo ngokuvamile izohlala ngale noma isondele kumabhendi angaphandle. Njengoba imakethe iqala ukwenza inkontileka, amanani ngokuvamile angangena emigqeni emaphakathi yama-Bollinger Bands futhi ngezinye izikhathi aze athinte futhi enqabe ibhendi yangaphandle ephambene.. Bese, njengoba umkhuba uqala futhi futhi kuvela ikhandlela lomfutho, intengo ngokuvamile izovala emuva ngaphandle kwebhendi yangaphandle ekuqondeni kwethrendi. Lokhu kusho ukuqala okungenzeka komfutho omusha obheke kuthrendi.
Amazing.ex4 (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
Amabhendi we-Bollinger kufanele abe ngaphezu kwe 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Amabha aku-Awesome Oscillator kufanele abe mihle akhombise ukuthambekela kwe-bullish.
Njengoba intengo ihlehla, intengo kufanele ivale ngaphakathi kwemigqa ye-Bollinger Band.
Ama-Bollinger Bands nawo kufanele aqale ukwenza inkontileka.
I-Awesome Oscillator kufanele ihlale inethemba naphezu kokuhlehla.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho ikhandlela lomfutho livala ngaphezu komugqa wangaphandle ophezulu wama-Bollinger Bands.
Setha target azithathe inzuzo ngesikhathi 2x ingozi ekulahlekeni stop.
Amabhendi we-Bollinger kufanele abe ngaphansi kwe 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Amabha aku-Awesome Oscillator kufanele abe negethivu ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
I-Awesome Oscillator kufanele ihlale inegethivu naphezu kokuhlehla.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho ikhandlela lomfutho livala ngaphansi komugqa wangaphandle ophansi we-Bollinger Bands.
Leli su lisebenza kahle kakhulu kuthrendi esimisiwe ethrendayo kakhulu. Isekelwe ekuphusheni komfutho okulinganiswa kusetshenziswa amabhendi weBollinger.
Isihluthulelo sokusebenzisa ngempumelelo leli su ukulisebenzisa emakethe ethrendayo enamandla. Lokhu kubonakala ngokwehlela okumaphakathi okuhambayo.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi umfutho uvame ukuphuma njengoba umkhuba uqhubeka isikhathi eside. Amathrendi angaba nokudonsa emuva okuningi, nokho ukuhweba ngokudonsa emuva kwesikhathi kuvame ukuba namathuba aphansi.
Lawa masu okuhweba angamathuluzi ongawasebenzisa ukuze uzuze emakethe. Kukusiza ukuthi ukhombe amathuba okuhweba obungawanaka ngenye indlela. Noma kunjalo, akukho kulokhu okuyi-Holy Grails yokuhweba. Empeleni, ayikho i-Holy Grail ekuhwebeni. Ukuhweba kumayelana namathuba kanye nokubhekwa kokuziphatha kwemakethe.
Ukhiye wokuhweba usekukhombeni ngendlela efanele ukuziphatha kwemakethe okwamanje. Ngokushesha nje lapho usukwazi ukuhlonza lezi zindlela zokuziphatha, khona-ke ungasebenzisa isu elifanele.
Phezulu 5 Best Forex Trend Ukulandela Amasu Asebenzayo iyinhlanganisela ye-Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Phezulu 5 Best Forex Trend Following Strategies That Work inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Top 5 Umkhuba Ohamba Phambili We Forex Ukulandela Amasu Asebenzayo?
Khipha ku-internet Phezulu 5 Best Forex Trend Ukulandela Amasu Asebenzayo.zip
Hambisa kwesokudla ukuze ukhethe Phezulu 5 Umkhuba Ohamba Phambili We Forex Ukulandela Amasu Asebenzayo
Uzobona Phezulu 5 I-Forex Trend Ehamba phambili Elandela Amasu Asebenzayo iyatholakala eshadini lakho
Isiqephu esedluleX2MA Candle MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoJSatl Candle Chl HTF MT5 Indicator